Daawo: Muxaadaro ku saabsan Fadliga Soonka oo u inoo soo jeediyo, Sh Mustafe Xaaji Ismaaciil
June 6, 2016 / Warar	/
Ciidanka Gumaysiga Oo Shacabka Ogadenia Qaab Cusub Uxasuuqaya.
Wararka naga soogaagaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in ay ciidanka gumaysigu isticmaalayaan qorshayaashii ugu dambeeyay ee ay ku dabar jarayaa dadka iyo duunyada Ogadenia. Warkan oo aan kahelay […]
Askar Katirsan Ciidamada AMISOM oo Muqdisho Lagu Xidhay.
Masuuliyiinta Ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 5-Askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo 10-qof oo Soomaali ah kuwaasoo iibinayay qalabka loo […]
Maqaal : Hurgumada Gumaysiga Iyo Halganka JWXO Q2aad.
Maqaal: Hurgumada Gumaysiga iyo Halganka JWXO Q2aad. Qormadan waxay daba socotaa maqaalkii hore ee uu ciwaankiisu ahaa “Hurgumada Gumaysiga iyo Halganka (JWXO) waana qaybtiisi 2aad, […]
June 6, 2016 / Maqaalo	/
Gabadh Suxufiyad Ah oo Dableey Hubaysan Ay Kudileen Magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu toogtay gabadh suxufiyad ahayd oo la oran jiray Sagal Salaad Cismaan oo u shaqaynaysay warbaahinta dawladda Soomaaliya. Rag ku hubeysan bastoolado ayaa […]
Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ah ee xubnaha jaaaliyada isugu iman jireen sadexdii biloodba mar ayaa markan lagu qabtay waqooyinka Sweden magalada Kramfors waxaa ka […]
June 5, 2016 / Warar, Warar Aduunka, Wararka Yurub	/
Kulan Heer Sare Ah oo Denmark Lagu Qabatay & Madax JWXO Kamid Ah oo Kaqaybgalay.
Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee wadanka Dermark ayaa isugu timid kulankoodii caadiga ahaa ee Jaaliyada. Kulankan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo qorsheeyay waxaa kasoo qayb galay […]
June 5, 2016 / Warar	/
Shir si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacay jaaliyada Eastern Cape ee S. A
Caawa oo ay taariikhdu kubeengantahay 5/6/2016 waxaa xafiska jaaliyada ee eastern cape dhacay shirkii kaadirka jaàliyada oo ay isugu yimaadeen inka badan 60 xubnood Shirkan […]
Ramadan Mubarak: Bishii Barakaysnayd ee Ramadaan oo Caawa Kawsaday.
Ramadaan Mubraak, Bahda ONA waxay tahniyad balaadhan hawada usoo marinaysaa dhamaan Muslimiinta gaar ahaan ummada Somaaliyeed meel kastooy joogaanba. Waxaan ugu tahniyadaynaynaa galitaanka bisha barakaysan ee […]
Tacadiyadii Ugu Dambeeyay ee Kadhacay Ogadenia.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ciidanka wayaanahu ugaysteen dad shacab ah oo ku dhaqan guud ahaan wadanka Ogadenia. […]
Hay’ada Xuquuqda Aadamaha Udooda Oo Kawalaacsan Dhaqanka TPLF.
Hay’ada xuquuqda aadamaha udooda oo walaac kamuujisay sida ay xukuumada Itoobiya ula dhaqanto mucaaradka. Warbixin aad u dheer oo ay soo saartay hay’adu ayaa lagu […]
Daawo: Oromiya oo Lagu Qabtay Mudaaharaad Balaadhan oo Itoobiya Kadhan Ah.
Shacab aad u tiro badan oo kamid ah shacabka Oromiya ayaa iskugu soobaxay mudaaharaad balaadhan oo lagaga soo horjeedo taliska Woyaanaha ee gabalkiisu dhacay. Mudaaharaadkan […]
Maydad Dad Tahriib Ah oo Laga Helay Xeebaha Dalka Libiya.
Ku dhawaad 100 meydadka Tahriibayaal ayaa kusoo caariyey xeebaha dalka Liibiya oo laga aruurinayey tan iyo shalay, dadkan ayaa larumeysan yahay inay saarnaayeen Dhowr doonyood […]
Safaarada Ugu Wayne oo Turkigu Leeyahay Ayaa Laga Furay Magaalada Muqdisho.
Sidii aad wararkaanagii hore kula socoteemba Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa booqashaddiisii sadexaad Somalia ku tagay Jimcihii lasoo dhaafay. Booqashadan Madaxwaynaha Turkiga ayaa soo […]
Shirkii Jaliyada Ogadenya ee Minnesota oo si Habsami ah u qabsomay
Manta oy tarikhidu tahay 04 Jun 2016Waxaa hoolka shirarka ee Ogaden community of USA Ka dhacay shir ay isugu yimaden dhamaanxubnahaJwxo oo so bux dhafiyay […]
June 4, 2016 / Warar	/
Shirkii Haweenka S.ogadenia ee Norway oo Hada Kasocda Oslo.
Shirkii Haweenka S.ogadenia ee Norway oo hada kasocda magaalada Oslo ee wadanka Norway. Shirkan oo ah shir muhiim ah waxaa marti ku ahayd Gudooyiyaha Haweenka […]
War hordhac ah Shirkii xubnaha jaaaliyada Ogadenia Ee Sweden oo goor dhaw ka furmay magalada Kramfors(sawiro hordhac ah)
Shirka jaaliyada ogadenia ee Sweden ayaa hada ka furmay magalada Kramfors,shirka oo ku bilawday jawi aaad u wanaagsan waxaa ka soo qayb galay xubnaha jaaliyada […]
June 4, 2016 / Warar, Warar Aduunka, Wararka Yurub	/
Feedhyahankii Caanka Ahaa Ee Maxamed Cali Oo Geeriyooday
June. 4, 2016-Allaha u naxariistee Maxamed Cali oo ah nin caan ku ahaa ciyaaraha feedhka marar bandanna ku guuleystay abaalmarino kala duwan ayaa geeriyooday. Feedhyahan […]
Dhagayso: Gabaygii Dhugasho & Cabdullahi Macallin Dhoodan.
Gabaygii Dhugasho: Gabaygan waxaa latiriyay markay taariikhdu ahayd 1972 dii. Murtida kujirta waxaad moodaa in Soomaalida maanta joogta uu la hadlayo. Waqti kooban sii oo […]
Daawo:Taliska ciidamada xoraynta Ogadenia oo Lugta Qabtay beentii Woyanuhu Aljazeera u adeeg-saday.
Saraakiisha sare ee ciidanka JWXO ayaa waxba kama jiraan kutilmaamay muuqaal lagu baahiyay Tv-ga Al-jazeera kaasi oo dhalinyara kadhex muuqatay lagu sheegay inay kamid ahaayeen […]